Ukwakhiwa kweeNdwendwe eziPhambili zePortfolio
Ingaba kuPhepha okanye kwi-Intanethi, khetha iiklip ezikubonisa kwiyona nto
Ukuba ungumfundi wezentatheli mhlawumbi sele usenalo inzululwazi inkulumo malunga nokubaluleka kokudala iphothifoliyo enkulu ye-clip ukuze ufumane umsebenzi kwiindaba zoshishino . Nakhu okufuneka ukwazi ukuze wenze oku.
Iziqulatho zikopi zamaphepha akho apapashwe . Uninzi lwababhali beendaba balondoloza iikopi zebali ngalinye abaye bapapasha, ukusuka esikolweni esiphakamileyo ukuya phambili.
Kutheni Ndifuna Iziqeshana?
Ukufumana umsebenzi ekuprintweni okanye kwi-journalism yewebhu.
Iziqhelo zisoloko ziyisigqibo sokuba umntu uqeshiwe okanye cha.
Iqoqo leempompo zakho ezilungileyo. Ubafaka kunye nesicelo sakho somsebenzi.
IPhepha kunye noMbane
Iziqeshana zePhepha zizithunyelwe ngeefowuni zamabali akho njengoko zibonakala zipapashwe (jonga ngaphezulu ngaphantsi).
Kodwa ngokugqithiseleyo, abahleli banokufuna ukubona iipotfoliyo zeekhompyutheni ze-intanethi, eziquka iziqhagamshelo kumanqaku akho. Abaphengululi abaninzi banamaphepha abo kunye neeblogi zabo apho zibandakanya izixhumanisi kuwo onke amanqaku abo (bona ngaphezulu ngaphantsi.)
Ndingayenza Njani isigqibo sokuba yeyiphi isiqeshana esifakwe kwisicelo sam?
Kucacile, faka iziqwenga zakho eziqinileyo, ezona zifanelekileyo-ezibhaliweyo kwaye zichazwe ngokupheleleyo. Khetha iinqununu ezinamabala amakhulu - abahleli bathanda i- ledes enkulu . Yibani na amabali amakhulu kunawo wonke, owenza iphepha lokuqala. Sebenza kwiintlobo ezincinci ukubonisa ukuba uphumelele kwaye uphikelele zombini iindaba eziphathekayo kunye neempawu ezinzima .
Ngokucacileyo ziquka iziqeshana ezichaphazelekayo emsebenzini owufunayo. Ukuba ufaka isicelo somsebenzi wokubhala wezemidlalo , faka amaninzi amabali ezemidlalo .
Zingaphi Iiklip Iimpawu Okufuneka Ndizibandakanye Kwisicelo Sakho?
Iimbono ziyahluka, kodwa abaninzi abahleli bathi akukho zikhetho ezingaphezulu kweesithandathu kwisicelo sakho. Ukuba uphonsa kakhulu banakuze bafunde.
Khumbula, ufuna ukuqwalasela umsebenzi wakho omhle. Ukuba uthumela amaninzi amanqaku akho aphezulu angase alahleke kwi-shuffle.
Ndingayifaka njani iWindows Portfolio?
IPhepha: Kwiimifanekiso zephepha zamaphepha, abahleli ngokuqhelekileyo bakhetha iifotoscopies ngaphezu kweengqungquthela zamanzi. Kodwa qiniseka ukuba ii-photocopies zicocekile kwaye ziyafaneleka. (Amaphephancwadi amaphephancwadi ahlala ekhompyutheni ebumnyama, ngoko ke kufuneka ulungelelanise ukulawulwa kwikhopi yakho ukuze uqinisekise ukuba iikopi zakho zikhawuleze ngokwaneleyo.) Emva kokuba udibanise iziqeshana ozifunayo, zibeke ndawonye kwimvulophu ye-manila kunye kunye nekhowudi yakho yekhava kunye nokuqalisa kwakhona.
Iifayile zePail: Amaphephandaba amaninzi, ngokukodwa amaphepha ekholejini, akhiqiza iinguqulelo ze-PDF kwimiba nganye. Ii-PDF ziindlela ezilungileyo zokugcina iziqeshana. Uwagcina ekhompyutheni yakho kwaye ayikaze aphuzi okanye aphule. Kwaye zinokuthunyelwa nge-imeyile ngokulula njengeziqhotyoshelweyo.
I-intanethi: Hlola umhleli oza kukhangela isicelo sakho. Abanye bangamkela okunamathiselwe nge-imeyile equkethe ii-PDF okanye iifowuni zeendaba ze-intanethi, okanye ufuna ikhonkco kwikhasi lewebhu apho ibali libonakala khona. Njengoko kuphawuliwe kwangaphambili, abavakalisi abaninzi bakha iipotifoliyo ze-intanethi zomsebenzi wabo.
Enye Impendulo yoMhleli Ngeemboniselo ze-Intanethi
URob Golub, umhleli wendawo we-Journal Times e-Racine, eWisconsin, uthi uhlala ecela abafaki-sicelo ukuba bamthumelele uludwe lwekhonkco kumanqaku abo ase-intanethi.
Into ebaluleke kakhulu umenzi wesicelo angathumela? Iifayile zeJpeg. "Kunzima ukufunda," kusho uGolub.
Kodwa uGolub uthi ukufumana umntu ofanelekileyo kubaluleke ngaphezu kweenkcukacha zendlela umntu asebenza ngayo. Into ephambili endiyifunayo yintatheli yeendaba enqwenela ukuba ifike kwaye yenze okulungileyo kuthi, "ushoyo. "Inyaniso kukuba, ndiza kuphazamisa ukuba ndifumane umntu omkhulu."
Eyona nto ibalulekileyo: Hlola iphepha okanye iwebhusayithi apho usebenzisa khona, ubone indlela abafuna izinto zenze ngayo, kwaye wenze njalo ngaloo ndlela.
IYunivesithi yaseKentucky Admissions Statistics
Imbali yeLindbergh Baby Kidnapping
Iintsuku Ezindala Ezindala - Amanzi